Nabata na weebụsaịtị ọhụrụ anyị | Bromley, Lewisham & Greenwich Uche
Nabata na weebụsaịtị ọhụrụ anyị
Ihe na November 26, 2020 site BLG Uche Udi: General
Obi dị anyị ụtọ ịkpọsa mwepụta nke weebụsaịtị ọhụrụ anyị!
Yabụ, kedu ihe ọhụụ?
Ọfọn, ewepụghị peeji nke 200 nke ihe ọmụma na ihe na-egbukepụ egbukepụ, nke ọhụrụ, saịtị ọhụrụ anyị na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịnweta ngwa enyemaka na ndụmọdụ kwesịrị ekwesị maka mkpa gị. Naanị họrọ ma ịchọrọ enyemaka na mgbaka ma ọ bụ nsogbu ahụike ọgụgụ isi, wee gaa mpaghara gị iji lelee ọrụ niile dị mkpa.
Enwekwara ụfọdụ ọrụ ọhụụ anyị chọrọ ịdọta uche gị:
Ọrụ nnweta ọhụụ anyị - obere obere odo odo na aka nri aka nri. Pịa na nke a ma ị nwere ike ime ka ederede ahụ buru ibu, họrọ ọdịiche dị mma nke agba, mee ka saịtị ahụ bụrụ dyslexia-friendly na ndị ọzọ!
Nwere ike ịhọrọ ugbu a ịhụ weebụsaịtị anyị n'ọtụtụ asụsụ. Naanị pịa bọtịnụ ntụgharị asụsụ dị n'elu aka nri.
Nwere ike ịtọlite ​​profaịlụ ka ọ dị mfe ide maka oru. Nke a pụtara na ọ bụrụ na itinye akwụkwọ maka anyị maka ọrụ dị iche iche, ọ gaghị adị mkpa ka ị dejupụta otu ozi ugboro ugboro
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ọzụzụ ahụike ọgụgụ isi maka ndị ọrụ gị, ị nwere ike ịhọrọ ma họrọ usoro ọzụzụ ọzụzụ ga-adabara mkpa nke nzukọ gị.
You'll ga-ahụkwa echiche na ozi dị egwu banyere otu ị ga-esi kwado ọrụ anyị bara uru na nke ọhụụ ego ngalaba.
Gụkwuo banyere anyị dị ka otu nzukọ, gụnyere ndị ụkpụrụ, ọhụụ na nzube nke na akwado ihe niile anyi na eme akụkọ na-adọrọ mmasị.
Ihe omuma ohuru anyi juputara na ihe omuma nke ndu na ikpe ọmụmụ site na ndị ọrụ ọrụ anyị, na-egosi mmetụta na uru ọrụ BLG Mind na-ewetara ndị mmadụ, yana mgbanwe dị mma anyị na-eme na ndụ ha.
Obi siri anyị ike na weebụsaịtị ọhụrụ anyị ga-enyere anyị aka ịnọ ebe a maka ndị nwere nsogbu ahụike ọgụgụ isi na ndị nwere isi mgbaka.
You nwere nzaghachi ọ bụla na saịtị ọhụrụ anyị? Ọ ga-amasị anyị ịnụ ya.
Email anyị na Communications@blgmind.org.uk.
Nchọgharị obi ụtọ!